ပဲပြားများနှင့် ပတ်သက်၍ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး FDA က “အထူးသတိပေး ကြေငြာချက်” ထုတ်ပြန်ထား ⋆ The Ginger Media
မုံရွာမြို့နယ်ရှိ သာစည်ဈေး နှင့် သံလမ်းဈေးများတွင် ရောင်းချလျှက်ရှိသော အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ(I)စာလုံးပါရှိသည့် ပဲပြားအစိုတုံးများတွင် ခွင့်မပြုဓာတုပစ္စည်း(Formalin)(ဖော်မလင်)များ ပါရှိကြောင်း…..
စစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါသဖြင့် ၎င်းအမှတ်တံဆိပ်ပါ ပဲပြားများအား ၀ယ်ယူရောင်းချခြင်း၊ စားသုံးခြင်းများ မပြုလုပ်ကြရန် နှင့် ထပ်မံဝယ်ယူရောင်းချခြင်း ပြုလုပ်ပါက အမျိုးသားအစားအသောက်ဥပဒေအရ ထိရောက်စွာ အရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး FDA က အသိပေးကြေငြာထားသည်။
(အငြိမ်းစား) အစားသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေး ဦးစီးဌာန နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
မေး. ဖော်မလင် အကြောင်း သိပါရစေ ဆရာမ။
ဖြေ. ဖော်မလင် ဆိုတာ အရောင်အဆင်းမရှိ၊ အနံ့ပြင်းတဲ့ ဓာတုပစ္စည်း တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
ဖော်မယ်ဒီဟိုက်((formaldehyde)၊ မက်သနော((methanol)၊ ရေ (water) စုပေါင်းထားတဲ့ အရောအနှောတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဖော်မလင် အရည်မှာ ဖော်မယ်ဒီဟိုက် ၃၇ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်ပါတယ်။
မေး. ဖော်မလင် ကို သဘာဝအားဖြင့် ဘယ်လိုနေရာတွေမှာ အသုံးပြုလေ့ရှိပါသလဲ ဆရာမ။
ဖြေ. ဖော်မလင် ကို အဓိကအားဖြင့် လူသေ တွေကို ကြာရှည်ခံအောင် စိမ်တဲ့နေရာမှာ သုံးပါတယ်။ ပြီးတော့-
– ပိုးသတ် ရာမှာ သုံးပါတယ်၊ ကြမ်းခင်းတွေ၊ အ၀တ်အစားတွေ၊ သဘောင်္တွေနဲ့ သိုလှောင်ရုံတွေကို သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရာမှာ အသုံးပြုပါတယ်။ အင်းဆက်ပိုး တွေ၊ ယင်ကောင်တွေ နှိမ်နင်းရာမှာသုံးပါတယ်။
-ပိုးချည်၊ ဆိုးဆေး၊ မှန်နဲ့ ဖောက်ကွဲပစ္စည်းတွေ ပြုလုပ်ရာမှာ သုံးပါတယ်။ ဓာတ်မြေသြဇာနဲ့ ရေမွှေး ပြုလုပ်ရာမှာ သုံးပါတယ်။ အလှကုန်ပစ္စည်းတွေ တာရှည်ခံ အောင် ပြုလုပ်ရာမှာ သုံးပါတယ်။ လျှပ်ကာပစ္စည်းတွေ ပြုလုပ်ရာမှာ သုံးပါတယ်။ အထပ်သား တွေ ကပ်ရာမှာ သုံးပါတယ် ….
မေး. အခုအခါမှာ ဖော်မလင် ကို အစားအသောက် တွေမှာတာရှည်ခံအောင် သုံးနေကြတယ်လို့ ကြားသိရပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှင်းပြပေးပါ ဆရာမ …..?
ဖြေ. ဖော်မလင် ကို အစားအသောက် တွေမှာ တာရှည်ခံပစ္စည်းအဖြစ် အသုံးမပြုရပါ။ ဖော်မလင် ကိုတာရှည်ခံပစ္စည်းအဖြစ် လွဲမှားစွာအသုံးပြုတတ်တဲ့ အစားအသောက်တွေကတော့-
– အသား၊ ငါး၊ Seafood ခေါ် ပင်လယ်စာတွေ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ ၊ ပန်းသီး၊ လိမ္မော်သီး စတဲ့ အသီးအနှံတွေ၊ Tofu/ ပဲပြား၊ ပဲသွေး၊ မုန့်ဟင်းခါးဖတ် စတာတွေဖြစ်ပါတယ် …..
မေး. ဖော်မလင် ပါတဲ့ အစားအသောက် တွေကို စားသုံးမိရင် ဘယ်လို ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေ ဖြစ်တတ်ပါသလဲ ဆရာမ။
ဖြေ. ဖော်မလင် ပါတဲ့ အစားအသောက် ကို စားသုံးမိတာကြောင့် ဗိုက်နာခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ ၀မ်းသွားခြင်း၊ သတိလစ်မေ့မြောခြင်းနဲ့ အခန့်မသင့်ရင် သေဆုံးတဲ့အထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဖော်မလင်ပါတဲ့ အစားအသောက် ကိုရေရှည် စားသုံးမိတာကြောင့် ကျောက်ကပ်၊ အသည်းအစာအိမ်၊ အဆုတ်တို့ ပျက်စီးခြင်း၊ နောင်တစ်ချိန်မှာ ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားခြင်း ၊ အသည်းခြောက်ခြင်း၊
အသည်းကင်ဆာ၊ သွေးအားနည်းခြင်း၊ သွေးကင်ဆာတို့ ဖြစ်နိုင်ပြီး အထူးသဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ မွေးကင်းစ ကလေးတွေမှာ ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
ဖော်မလင် ပြဿနာ က မြန်မာတစ်နိုင်ငံတည်းမဟုတ်ဘဲ တရုတ်၊ ဗီယက်နမ်၊ ဘင်္ဂလား ဒေ့ရှ်၊ ထိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဟောင်ကောင်စတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်း ရှိနေတဲ့အတွက် ဥပဒေ ထုတ်ပြန်ပြီး အရေးယူနေကြတာ တွေ့ရပါတယ် …..
မေး. အစားအသောက် တွေမှာ ဖော်မလင် ပါ၊ မပါ ဘယ်လို သိနိုင်မလဲ ဆရာမ ….?
ဖြေ. ငါးဆိုရင် ဖော်မလင် ပါတဲ့အခါ အသား က ရာဘာ လို မာမာတောင့်တောင့်ဖြစ်နေမယ်၊ အကြေးခွံကမာနေမယ်၊ ငါးညှီနံ့မရဘူး၊ ယင်မနား ဘူး။
ပင်လယ်စာ ဆိုရင်ရာဘာလိုမာပြီး ဖြူနေမယ်၊ အနံ့မရှိဘူး။ ကင်းမွန် ဆိုရင် အရမ်းမာပြီး ဓား နဲ့ဖြတ်မှ ပြတ်နိုင်တယ်။ Tofu/ပဲပြား ဆိုရင်ပျော့မနေဘဲ မာမာတင်းတင်းဖြစ်နေမယ်။ ၂၄ နာရီ ကျော်ရင်လည်း မပျက်စီးဘူး။
မုန့်ဟင်းခါးဖတ် ဆိုရင် ပျော့ပြောင်းမနေဘဲ အီလက်စတစ် (Elastic)လို ဖြစ်နေမယ်။ ရေနွေးထဲထည့်ရင်ဆေးနံ့လိုလို၊ ပြာ(Ash)နံ့လိုလို ရနေမယ် ။
မေး. စားသုံးတဲ့ ပြည်သူ တွေကို ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုအကြံပြုချက်တွေကို ပေးလိုပါသလဲ ဆရာမ ….?
ဖြေ. ဖော်မယ်ဒီဟိုက်((Formadehyde)က ရေမှာ ပျော်ဝင်ပြီး အပူပေးရင် အငွေ့ပြန် ပျောက်ကွယ်နိုင်တာကြောင့် အသီးတွေကို မစားခင် တစ်နာရီခန့် ရေစိမ်ထားပါ။ အသီးအရွက် တွေကို မချက်ပြုတ်ခင် ဆားရေနဲ့ အချိန် ၁၀ မိနစ်ခန့် စိမ်ပြီးမှ ချက်ပါ။
ငါးဆိုရင် ဆားရေထဲမှာတစ်နာရီ စိမ်ထား ရင် ဖော်မလင် ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း ကို ဖယ်နိုင်တယ်၊ ရှလကာရည် ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း (Vinegar 90%)ပါတဲ့ ရေထဲမှာ စိမ်ရင်တော့ ဖော်မလင် ကို ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ဖယ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ် …..
မုံရှာမွို့နယျရှိ သာစညျစြေး နှငျ့ သံလမျးစြေးမြားတှငျ ရောငျးခလြှကျရှိသော အင်ျဂလိပျအက်ခရာ(I)စာလုံးပါရှိသညျ့ ပဲပွားအစိုတုံးမြားတှငျ ခှငျ့မပွုဓာတုပစ်စညျး(Formalin)(ဖျောမလငျ)မြား ပါရှိကွောငျး…..
စဈဆေးတှရှေိ့ရပါသဖွငျ့ ၎င်းငျးအမှတျတံဆိပျပါ ပဲပွားမြားအား ၀ယျယူရောငျးခခြွငျး၊ စားသုံးခွငျးမြား မပွုလုပျကွရနျ နှငျ့ ထပျမံဝယျယူရောငျးခခြွငျး ပွုလုပျပါက အမြိုးသားအစားအသောကျဥပဒအေရ ထိရောကျစှာ အရေးယူသှားမညျဖွဈကွောငျး စဈကိုငျးတိုငျးဒသေကွီး FDA က အသိပေးကွငွောထားသညျ။
(အငွိမျးစား) အစားသောကျနှငျ့ဆေးဝါးကှပျကဲရေး ဦးစီးဌာန နှငျ့ တှဆေုံ့ခွငျး
မေး. ဖျောမလငျ အကွောငျး သိပါရစေ ဆရာမ။
ဖွေ. ဖျောမလငျ ဆိုတာ အရောငျအဆငျးမရှိ၊ အနံ့ပွငျးတဲ့ ဓာတုပစ်စညျး တဈမြိုးဖွဈပါတယျ။
ဖျောမယျဒီဟိုကျ((formaldehyde)၊ မကျသနော((methanol)၊ ရေ (water) စုပေါငျးထားတဲ့ အရောအနှောတဈခုဖွဈပွီး ဖျောမလငျ အရညျမှာ ဖျောမယျဒီဟိုကျ ၃၇ ရာခိုငျနှုနျး ပါဝငျပါတယျ။
မေး. ဖျောမလငျ ကို သဘာဝအားဖွငျ့ ဘယျလိုနရောတှမှော အသုံးပွုလရှေိ့ပါသလဲ ဆရာမ။
ဖွေ. ဖျောမလငျ ကို အဓိကအားဖွငျ့ လူသေ တှကေို ကွာရှညျခံအောငျ စိမျတဲ့နရောမှာ သုံးပါတယျ။ ပွီးတော့-
– ပိုးသတျ ရာမှာ သုံးပါတယျ၊ ကွမျးခငျးတှေ၊ အဝတျအစားတှေ၊ သဘောင်ျတှနေဲ့ သိုလှောငျရုံတှကေို သနျ့ရှငျးရေးပွုလုပျရာမှာ အသုံးပွုပါတယျ။ အငျးဆကျပိုး တှေ၊ ယငျကောငျတှေ နှိမျနငျးရာမှာသုံးပါတယျ။
– ပိုးခညျြ၊ ဆိုးဆေး၊ မှနျနဲ့ ဖောကျကှဲပစ်စညျးတှေ ပွုလုပျရာမှာ သုံးပါတယျ။ ဓာတျမွသွေဇာနဲ့ ရမှေေး ပွုလုပျရာမှာ သုံးပါတယျ။ အလှကုနျပစ်စညျးတှေ တာရှညျခံ အောငျ ပွုလုပျရာမှာ သုံးပါတယျ။ လြှပျကာပစ်စညျးတှေ ပွုလုပျရာမှာ သုံးပါတယျ။ အထပျသား တှေ ကပျရာမှာ သုံးပါတယျ ….
မေး. အခုအခါမှာ ဖျောမလငျ ကို အစားအသောကျ တှမှောတာရှညျခံအောငျ သုံးနကွေတယျလို့ ကွားသိရပါတယျ။ အဲဒါနဲ့ ပတျသကျပွီး ရှငျးပွပေးပါ ဆရာမ …..?
ဖွေ. ဖျောမလငျ ကို အစားအသောကျ တှမှော တာရှညျခံပစ်စညျးအဖွဈ အသုံးမပွုရပါ။ ဖျောမလငျ ကိုတာရှညျခံပစ်စညျးအဖွဈ လှဲမှားစှာအသုံးပွုတတျတဲ့ အစားအသောကျတှကေတော့-
– အသား၊ ငါး၊ Seafood ချေါ ပငျလယျစာတှေ၊ ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှေ ၊ ပနျးသီး၊ လိမ်မျောသီး စတဲ့ အသီးအနှံတှေ၊ Tofu/ ပဲပွား၊ ပဲသှေး၊ မုနျ့ဟငျးခါးဖတျ စတာတှဖွေဈပါတယျ …..
မေး. ဖျောမလငျ ပါတဲ့ အစားအသောကျ တှကေို စားသုံးမိရငျ ဘယျလို ကနျြးမာရေး ပွဿနာတှေ ဖွဈတတျပါသလဲ ဆရာမ။
ဖွေ. ဖျောမလငျ ပါတဲ့ အစားအသောကျ ကို စားသုံးမိတာကွောငျ့ ဗိုကျနာခွငျး၊ ပြို့အနျခွငျး၊ ၀မျးသှားခွငျး၊ သတိလဈမမွေ့ောခွငျးနဲ့ အခနျ့မသငျ့ရငျ သဆေုံးတဲ့အထိ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
ဖျောမလငျပါတဲ့ အစားအသောကျ ကိုရရှေညျ စားသုံးမိတာကွောငျ့ ကြောကျကပျ၊ အသညျးအစာအိမျ၊ အဆုတျတို့ ပကျြစီးခွငျး၊ နောငျတဈခြိနျမှာ ကငျဆာရောဂါဖွဈပှားခွငျး၊ အသညျးခွောကျခွငျး၊
အသညျးကငျဆာ၊ သှေးအားနညျးခွငျး၊ သှေးကငျဆာတို့ ဖွဈနိုငျပွီး အထူးသဖွငျ့ ကိုယျဝနျဆောငျနဲ့ မှေးကငျးစ ကလေးတှမှော ဆိုးရှားစှာ ထိခိုကျစနေိုငျပါတယျ။
ဖျောမလငျ ပွဿနာ က မွနျမာတဈနိုငျငံတညျးမဟုတျဘဲ တရုတျ၊ ဗီယကျနမျ၊ ဘင်ျဂလား ဒရှေျ့၊ ထိုငျး၊ အငျဒိုနီးရှား၊ ဟောငျကောငျစတဲ့နိုငျငံတှမှောလညျး ရှိနတေဲ့အတှကျ ဥပဒေ ထုတျပွနျပွီး အရေးယူနကွေတာ တှရေ့ပါတယျ …..
မေး. အစားအသောကျ တှမှော ဖျောမလငျ ပါ၊ မပါ ဘယျလို သိနိုငျမလဲ ဆရာမ ….?
ဖွေ. ငါးဆိုရငျ ဖျောမလငျ ပါတဲ့အခါ အသား က ရာဘာ လို မာမာတောငျ့တောငျ့ဖွဈနမေယျ၊ အကွေးခှံကမာနမေယျ၊ ငါးညှီနံ့မရဘူး၊ ယငျမနား ဘူး။
ပငျလယျစာ ဆိုရငျရာဘာလိုမာပွီး ဖွူနမေယျ၊ အနံ့မရှိဘူး။ ကငျးမှနျ ဆိုရငျ အရမျးမာပွီး ဓား နဲ့ဖွတျမှ ပွတျနိုငျတယျ။ Tofu/ပဲပွား ဆိုရငျပြော့မနဘေဲ မာမာတငျးတငျးဖွဈနမေယျ။ ၂၄ နာရီ ကြျောရငျလညျး မပကျြစီးဘူး။
မုနျ့ဟငျးခါးဖတျ ဆိုရငျ ပြော့ပွောငျးမနဘေဲ အီလကျစတဈ (Elastic)လို ဖွဈနမေယျ။ ရနှေေးထဲထညျ့ရငျဆေးနံ့လိုလို၊ ပွာ(Ash)နံ့လိုလို ရနမေယျ ။
မေး. စားသုံးတဲ့ ပွညျသူ တှကေို ဒါနဲ့ပတျသကျပွီး ဘယျလိုအကွံပွုခကျြတှကေို ပေးလိုပါသလဲ ဆရာမ ….?
ဖွေ. ဖျောမယျဒီဟိုကျ((Formadehyde)က ရမှော ပြျောဝငျပွီး အပူပေးရငျ အငှပွေ့နျ ပြောကျကှယျနိုငျတာကွောငျ့ အသီးတှကေို မစားခငျ တဈနာရီခနျ့ ရစေိမျထားပါ။ အသီးအရှကျ တှကေို မခကျြပွုတျခငျ ဆားရနေဲ့ အခြိနျ ၁၀ မိနဈခနျ့ စိမျပွီးမှ ခကျြပါ။
ငါးဆိုရငျ ဆားရထေဲမှာတဈနာရီ စိမျထား ရငျ ဖျောမလငျ ၉၀ ရာခိုငျနှုနျး ကို ဖယျနိုငျတယျ၊ ရှလကာရညျ ၉၀ ရာခိုငျနှုနျး (Vinegar 90%)ပါတဲ့ ရထေဲမှာ စိမျရငျတော့ ဖျောမလငျ ကို ၁၀၀ ရာခိုငျနှုနျး ဖယျနိုငျတယျလို့ ဆိုပါတယျ …..